Tag: qaraxii | Sagal Radio Services
Tirada dadkii ku dhintay qaraxii xooganaa ee Hotel SYL oo gaartay 26 ruux
Sagal Radio Services • News Report • August 31, 2016
Diblomaasi Kenyan ah oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkii Hotel Saxafi
Diblomaasi Kenyan ah ayaa la xaqiijiyay inuu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii shalay lagu qaaday Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho.
Faah faahin ku aadan Weerarkii Hotelka Saxafi iyo khasaarihii ka dhashay (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • November 1, 2015
In ka badan 15 ruux oo isugu jira mas’uuliyiin, saraakiil iyo shacab ayaa ku dhimatay, tiro labaatan ka badan waa ay ku dhaawacmeen, weerar saaka aroortii hore Al-Shabaab ku qaadeen Hotelka Saxafi oo ku dhow Isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada Ammaanka dowladda oo soo afjaray howl galkii Hotel Saxadi
Ciidamada ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ayaa soo afjaray howl galkii mudada saacadaha badan qaatay ee ka socday Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho, kadib markii saaka waabarigii hore dabley ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u gashay.
Wasaaradda Amniga oo ka hadashay weerarkii Dhismaha Wasaaradda Hidaha iyo Tacliinta Sare (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • April 15, 2015
Wasaaradda Amniga Gudaha ayaa ka warbixiyay weerarkii duhurnimadii maanta dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen dhismaha Wasaaradda Hidaha iyo tacliinta sare oo ay ku howl galaan Wasaaraddaha Waxbarashada iyo Batroolka.
Daawo Sawirrada Qaraxii Ismiidaaminta ee lagu qaaday Hotelka SYL ee ku dhow Madaxtooyada
Sagal Radio Services • News Report • January 23, 2015
Labo weerar oo ismiidaamin ahaa ayaa duhurkii shalay lagu qaaday Hotelka SYL ee ku dhow Xarunta Madaxtooyada, iyadoo hotelka 10-kii bishan lagu qabtay Shirkii wasiiradda Arrimaha Dibada IGAD, waxaana hotelkan uu ahaa mid dhowaan dib loo dayactiray.
Daawo Sawirada: Weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay Agagaarka Garoonka Aadan Cadde
Sagal Radio Services • News Report • February 13, 2014
Faah Faahino Dheeraad ayaa kasoo baxaya Qarax Ismiidaamin ah oo maanta duhurkii ka dhacay meel wax yar u jirta iridka Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Mgaaalada Muqdisho .
Saraakisha Amaanka oo ka hadlay Qarax ismidaamin ah oo Muqdisho kadhacay
Sagal Radio Services • News Report • November 9, 2013
Afhayeenka Booliska ahna Afhayeenka Laamaha Amniga Dawlada Janeral Maxamed Yuusuf Cumar (Madaale) oo Shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho xalay ayaa waxa uu ka warbixiyey qaraxyo ka dhacay Hoteel dad badan ku sugnaayeen.
(Sawirro)Qasaaraha ka dhashay qaraxii xalay oo sii kordhay iyo Al-Shabaab oo sheegatay
Qasaaraha ka dhashay qaraxii xalay ka dhacay Hotelka Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho ayaa kordhay, iyadoo weerarkan ay sheegteen Xarakada Al-Shabaab.